विश्वभर कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै, भारतमा १ करोडबढि, कुन देशमा कति ? - Jyotinews
विश्वभर कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै, भारतमा १ करोडबढि, कुन देशमा कति ?
ज्योतिन्यूज २०७७ पुष ४ गते ७:२१
काठमाडौं । भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १ करोड नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २६ हजार संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या १ करोड ४ हजार ८२५ पुगेको हो । प्रभावित मुलुकको दोस्रो स्थानमा रहेको भारतमा गत २४ घण्टामा भारतमा कोरोना संक्रमणको कारण ३४२ जनाको मृत्यु भएपछि कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ४५ हजार १७१ जना पुगेको छ ।
यस्तै विश्वभर कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमण र मृत्युदर अझै घट्न सकेको छैन । यो समाचार तयार पार्दासम्म संक्रमितको संख्या ७ करोड ५९ लाख नाघेको छ भने १६ लाख ८० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।
कोरोना भाइरससम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गरिरहेको साइट वर्ल्डोमिटर्सको पछिल्लो विवरण अनुसार विश्वभर ७ करोड ५९ लाख ८१ हजार ५८० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । चीनको हु बेई प्रान्तको राजधानी वुहानबाट गत वर्षको डिसेम्बर अन्तिममा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट विश्वभर १६ लाख ८० हजार २१६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अहिलेसम्म ५ करोड ३२ लाख ४६ हजार ४५८ जना कोरोना मुक्त भएका छन् ।
सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा बिहानसम्म ३ लाख २० हजार ८०४ जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ । अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या १ करोड ७८ लाख ८२ हजार ४१६ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ २ लाख ४८ हजार ७४३ भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने २ हजार ७५३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
प्रभावित देशको सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या ७१ लाख ६३ हजार ९१२ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ ८११ जनाको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ८५ हजार ६८७ पुगेको छ ।